amazon inodzosera nguva yekusununguka kuma amazon vana, inowedzera matsva maficha
Kuru Nhau & Ongororo Amazon inodzosera FreeTime kuAmazon Vana, inowedzera matsva maficha
Amazon inodzosera FreeTime kuAmazon Vana, inowedzera matsva maficha
Amazon yakazivisa nhasi iyo FreeTime uye FreeTime Isingagumi iri kuve Amazon Vana uye Amazon Vana +. Iyo yekumisikidza inovavarira kupa yakanyanya kukosha zita kune yeana-centric masevhisi ekambani, pamwe nekuwedzera mitezo mitsva patafura. FreeTime uye FreeTime Unlimited vakafarira mukurumbira mukuru pakati pevabereki nevana mumakore mashoma apfuura, nevabereki vanopfuura mamirioni makumi maviri vachishandisa sevhisi.
Amazon Vana uye Vana + vaka pamusoro pezvishandiso uye zvemukati, zvinopihwa neFreeTime. Amazon Kids + inotopa mabhuku anodarika zviuru makumi maviri, mabhaisikopo, mabhuku anonzwika, mitambo, uye zvemutauro wechiSpanish zvakagadzirirwa vana chete, uye vanogona kuzviwana zviri nyore pahwendefa ravo reAmazon Fire. Iko kune nyowani nyowani screen theme, inokurudzirwa kuvana vasere zvichikwira, iyo inobvumira Amazon Moto kuti itaridze uye inzwe zvakanyanya kunge 'yakakura-kumusoro' piritsi, pasina kukanganisa zvigadzirwa zvemafuta uye zvimwe zvinorambidzwa zvakaiswa muAmazon Parent Dashibhodhi.
Nemazita matsva anouya chimwe chinonakidza chiitiko chinobvumira vana kutepfenyura izwi rezwi kune maA Alexa madhivha mumba. Chinhu chinodaidzwa kuti Zviziviso uye chinoda mvumo yevabereki kuti ishandiswe.
Chikamu chemukati chebasa chakakwidziridzwa nemazana emavhidhiyo matsva akasarudzwa nemaoko kwemakore matanhatu kusvika gumi nemaviri, kusanganisira mavhidhiyo emitambo yemitambo uye PG uye mazita ehupenyu-kubva kumakambani akakurumbira uye mavara akaita seAngry Birds, LEGO, Transformers, Barbie , Carmen Sandiego. Nhepfenyuro dzakasiyana dzemimhanzi kubva kuIHeartRadio Mhuri dzakawedzerwa zvakananga paAmazon Kids skrini yekumba zvakare.
Amazon Kids service inoramba yakasununguka kuvabereki, nepo Vana + kunyoreswa kunotanga pamadhora 2.99 pamwedzi kune maPrime nhengo uye $ 4.99 pamwedzi kune vamwe vese. Chinhu chitsva ichi chichave kubuda mumavhiki anotevera.
batanidza steam controller ku Android
Walmart inotengesa t nhare mbozha
Musiyano Pakati Pekuita Kwekuyedza uye Kuedza Mutoro
Kutanga mangwana, iyo Pixel 2 akateedzana anorasikirwa nerutsigiro rweakakosha mafoto maficha
Virgin Mobile & chirongwa chitsva che $ 20 chiripo nhasi kubva kuWalmart; vatengi vanofanira kusarudza chero kutaura kana kunyora
Nei paine matema mabhawa kana ini ndichiona mafirimu paPad? Zvakatsanangurwa